Hooyo keligeed ma kari karto - Lastensuojelu.info
Nolosha caadiga ah ee waddankan cusub waa mid adag
Hooyada qoysku iyadoo keligeed wadata lix carruur ah oo ay dhashay ayey ka timi xero qaxooti, waxayna timi Finland. Qoyska aabbahood cudur buu ugu dhintay xeradii qaxootiga. Waddankii dagaal baa baabi’iyey oo noloshu waxay ahayd mid qas iyo qaxar ah. Hooyo waxay aad uga welwelsaneyd ehelkeedii ku hadhay meeshii qaxarku ka jirey. Hooyo markay waddankeedii joogtey suuragal uma aanay noqon inay iskuul dhigato oo ma aanay baran sida wax loo akhriyo iyo sida wax loo qoro.
Hooyo waxay dareemaysey, inay aad u adag tahay inay Finland u soo guurto iyo inay deegaan iyo dhaqan cusub la qabsato. Finland cimiladeedu waxay ahayd mid nooc kale ah: xilliga jiilaalka waxaa da’yey baraf aanay reerku weligood hore u arag. Dhismaha dabaqyada ah deggenaantooda waxaa la xiriirey xeerar xasuusashadoodu adag tahay oo ay tahay in si aad ah loo dhawro. Dadka deriska ah mararka qaar way xanaaqi jireen, markay carruurtu orordaan oo ay habeenkii sanqar digdig ah guriga ka dhex sameeyaan. Meel walba waxaa ku qornaa sharciyo iyo xeerar aanay hooyada qoysku sida loo akhriyo aqoon. La xaajoodka shaqaalaha maamulkuna dhibaatay ahayd oo hooyo ma aanay aqoon qof walba arrinta uu ka caawin karo. Wakhtiyada saacadda barashadooduna dhibaatay ahayd, taasina waxay keeni jirtey in mararka qaar la samayn waayo waxyaabihii ay ahayd in la sameeyo: hooyo wakhtigii la rabey wakhti aan ahayn bay xafiiska tegi jirtey, iyadoo turjubaankii uu tegey.
Hooyo way daashey
Carruurta afarta ugu yar yar waxay dhiganayeen xannaano, labada waaweyna dugsiga hoose. Iskuulka iyo xannaanada waxaa ka imaan jirey warqado ugu yaraan todobaadkiiba mar. Mar walbana lama heli jirin qof ku luuqad ah hooyada oo ka caawiya akhrinta farriimaha loosoo qoray.
Markii dambe hooyo waxay noqotay mid aad u daallan. Hooyo welwelkii hayey bay ka seexan weydey, habeenkiina waxay ka fekeri jirtey dadka qaraabada ah ee meesha fog jira. Maalintii marar badan bay ooyi jirtey, markii dambe waxay gaartey inay kari weydo inay carruurta yar yar maalin walba xannaanada geyso. Daalka iyo welwelka iyo murugadu waxay keeneen inay carruurteeda ku xanaaqdo badanaa. Waxaa dhici jirtey, inay hooyo ku qayliso carruurta oo ay mararka qaar markay carruurtu aamusi waayaan ay ku soo dhacdo, inay dhirbaaxdo kaga soo goyso. Hooyo way kari weydey inay maalin walba dharka dhaqdo ama ay carruurtu markay iskuulka aadayaan ay u xirto dhar ku haboon cimilada jirta. Carruurta waaweyn baa markay iskuulka ka soo baxaan isku deyi jirey inay walaalahooda yar yar daryeelaan.
Hooyo iyadoo kaashanaysa shaqaalaha xannaanada ayey badbaadada carruurta ka raadsatey in la caawiyo
Shaqaalaha xannaanadu hore ayey hooyo ugala hadleen fursadaha kala duduwan ee ay caawimo ku heli karto. Markay bilaabantay in carruurta yar yar intay xannaanada ka maqan yihiin ay ka badato intay joogaan, baa shaqaalaha xannaanada waxaa ku dhashay welwel. Shaqaaluhu waxay hooyada u sheegeen inay jiraan adeegyo badbaadada carruurta ah. Shaqaalaha xannaanada iyo hooyo waxay si wadajir ah go’aan ugu gaareen inay caawimo ka raadsadaan badbaadada carruurta. Qofka sooshalka badbaadada carruurta ah ayaa la kulmay hooyo iyo carruurta. Qofka sooshalka ah wuxuu sheegay in kulanka ujeedadiisu tahay, in laga wada hadlo dhibaatooyinka qoyska haysta iyo siday badbaadada carruurtu u caawin karto qoyska. Hooyo waxay ogolaatay, in lala xiriiro xannaanada iyo carruurta waaweyn macallimiintooda, si loogu kuur galo in loo baahan yahay badbaadada carruurta iyo in kale .
Qoyska waxaa si waxqabadka taageerada ee daryeelka furan ah loogu qabanqaabiyey shaqaale qoyska ah oo qoyska u yimaada kana caawiya arrimaha maalin walba jira. Shaqaalaha qoysku hooyo ayuu la samaynayey shaqada guriga laga qabanayo, wuxuuna ka caawinayey arrimaha isgaargaarey. Shaqaalaha qoysku markuu hooyo la kulmayo wuxuu kaashanayey turjubaan, markuu hooyo ka caawinayo arrimaha qoyskana wuxuuna la xiriirayey shaqaalaha maamulka ee kala duduwan. Inta badan qofka shaqaalaha qoyska ah hooyo wuu raaci jirey marka la dhammaynayo arrimaha culculus. Shaqaalaha qoysku wuxuu qoyska u imaan jirey labadii todobaadba mar, markaas oo ah wakhti lagu heshiiyey. Hooyo dhakhtar baa loo ballamiyey, dhakhtarkii baana hooyo ka caawiyey siday uga bixi lahayd hurdo la’aanta iyo niyadjabka. Shaqaalaha qoysku wuxuu hooyo u soo helay koox ku haboon oo samaysa shaqooyinka gacanta ee kala duduwan. Kooxda dadka ka tirsan waxaa ku jirey laba dumar ah oo ay hooyo isku luuqad ku hadlaan. Hooyo waxay u arkaysey, in kooxda kulamadeedu ahaayeen kuwo firfircooni geliya.